FANAFIHANA ANDRO ANTOANDRO : Sinoa roa mpivarotra etsy Behoririka indray naratra mafy
Lasibatry ny fanafihana tamin’ny andro antoandro be nanahary ny tranom-barotra lehibe iray mpamongady kapa, etsy Behoririka. 10 août 2017
Sinoa no tompon’ny tsena, ka roa tamin’ireto farany no naratra mafy. Na izany anefa dia niala maina ihany ireo jiolahy satria tsy nahazo na inona na inona.
Afak’omaly folak’andro tokony ho tamin’ny 4 ora hariva no notafihina lehilahy telo nirongo zava-maranitra ny tranom-barotra lehibe an’ny teratany sinoa, etsy Behoririka. Any amin’ny rihana voalohan’ilay tsena no misy ity voatafika ary avy aty ambany no fantatra fa niditra ireo olon-dratsy. Ireo olon-dratsy izay nanao tahaka ireny mpiantsena rehetra ireny, ka tsy nanampo na inona na inona. Fanampin’izany tsy nisy nisaron-tava ihany koa ry zalahy ary tsara afina tany anaty akanjo ireo fitaovam-piadiana. Efa tsara lamina tanteraka ny fanafihana ary heverina fa efa nokendrena tao anatin’ny maro mihitsy ity voatafika.
Araka ny loharanom-baovao voaray mody niditra tao anatin’ilay tsena izy telo lahy. Nibosesika ny olona mividy entana ary mody milahatra toy ny olon-drehetra ihany koa ry zareo. Rehefa somary nangina ny tsena vao namoaka ny antsibe tany am-balahany ny raikalahy ary avy hatrany dia nanambana izany tany amin’ireo Sinoa roa lahy nipetraka teo amin’ny fitoeram-bola. Notereny ireto farany hamoaka izay vola lafo ary avy hatrany dia nofirainy tamin’ilay antsy maranitra ka naratra mafy. Ireo Malagasy mpiasa tao amin’ilay tsena no nikoropaka niantso vonjy ka io no nampitsoaka an’ireo jiolahy.
Fantatra fa tsy nisy na inona na inona lasan’izy ireo noho ny tahotra ny ho tratra. Ireo mpivarotra nifanila tamin’ilay tsena lasibatra sy ireo teo amin’ny manodidina dia samy nilaza ho tsy nahare na inona na inona noho ny fahabetsahan’ireo olona tonga nividy entana. Na ireo mpivarotra amoron-dalana ivelan’ilay magazay aza dia tsy nisy nahatsikaritra olona miendrika ho jiolahy mpanafika velively.
Tonga teny an-toerana ny mpitandro filaminana saingy efa tafatsoaka ireo olon-dratsy. Nalefa notsaboina teny amin’ny hopitaly ireo naratra. Tato ho ato nirongatra ny fanafihana amin’ny andro antoandro, efa sahy miseho masoandro tanteraka ireo mpanao ratsy.Vao haingana no nifanesy ny fanafihana teny Andraisoro sy Ambatomaro.
Ny alatsinainy lasa teo ihany, tovovavy iray niandry fitateram-bahoaka teny Paraky-Tanjombato no nifandritahan’ny jiolahy. Voalaza fa nisy volabe tao anatin’ilay kitapo kely nosakelehin’ity lasibatra ary fantatr’ireo olon-dratsy izany. Telo lahy no nanatanteraka ny fandravana, nambaran’ireo nanatri-maso ny zava-niseho fa nitrosina tamin’ny tany mihitsy ilay vehivavy nakan’ireo olon-dratsy ilay sakaosy kely teny aminy. Nandritra an’io dia samy nitazam-potsiny tsy nisy sahy nanohitra ny manodidina noho ny fitaovam-piadiana nampiasan-dry zalahy.
Hita, araka izany, fa manao izay danin’ny kibony tanteraka ireo olon-dratsy, izay hanairana ny sain’ny tompon’andraikitra eo amin’ny filaminana fa miaina ao anaty tsy filaminana ny vahoaka.
FANAFIHANA ANDRO ANTOANDRO
2017-08-10 17:29:34 par
raha tsy maso solony maso n lalana misy dia tsihilamina n gasy